क्वाँटी बुझेर खानुस्, के–के छन् विशेषता ? - Aarthiknews
क्वाँटी बुझेर खानुस्, के–के छन् विशेषता ?
काठमाडौं । नेपालीहरूको विभिन्न चार्ड मध्ये जनैपूर्णिमामा पनि एक हो । जर्नपूर्णिमामा क्वाँटी खाने प्रचलन छ । यो वर्ष पनि जनैपूर्णिमा साउन २९ गते परेको छ । जनै पूर्णिमाको दिन बिशेष गरेर ब्राह्मण जातीले पुरानो जनै निकालेर नयाँ जनै लगाउने गर्दछन् भने यस चाडमा क्वाँटीलाई विषेश मानिन्छ ।
चार दिन भिजाएर टुसा उम्रेपछी मात्र पकाइने यस्ता परिकार स्वास्थ्यका लागि फाइदा जनक छन् टुसा उमारी बनाइने विशेष प्रकारको परम्परागत नेपाली परिकार (झोल) हो । विभिन्न थरीका नौ गेडगुडीको टुसा उमारी पुर्णिमाका दिन क्वाँटी खाने गरिन्छ । शक्ति र स्वाद दुवै मिल्ने भएकाले पनि क्वाँटीको विशेषता विषेश महत्व भएको हो ।
। हामीले खाने क्वाँटी विभिन्न देश इन्डिया, भुटान, अस्टेलियाबाट आउने गर्दछ भने नेपालको पश्चिम क्षेत्र र लुक्लाबाट आउने खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । क्वाटीमा बिषेश चना, भटमास, केराउ, मास, मुसुरो, बोडी, राजमासिमि, मुगु, मस्याङ्, बकुल्ला, लगायतका सामानहरू मिलायर क्वाँटी तयार गरिन्छ ।
मानिसको शरिरमा चाहिने पौष्टिक आहार क्वाँटीमा पाइन्छ । यस्तो गेडागुडी सबै उमेर समुहका मानिसहरूलाई खानको लागि योग्ग मानिन्छ । टुसा उम्रेका गेडागुडीले कुपोषण जस्ता रोगबाट बचाउनुका साथै प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । क्वाँटी शरीरमा सजिलै पाच्य हुन्छ, शरीरमा अनावश्यक वायु रहदैन, क्वाँटीमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सि, भिटामिन ई तथा खनिज पर्दार्थ प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ, यसले थकाई कम हुन्छ र तनाबबाट मुक्त गराउँछ, क्वाँटीको नियमित सेवनले स्मरणशक्ति बढ्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ, रक्तसञ्चार तथा स्नायु प्रणललिाई धेरै फाइदा हुन्छ
परम्परा देखिनै चल्दै आएको क्वाँटी खाने प्रचलन नेपालीहरूको लागि संस्कृति अंग मध्ये यसलाई पनि एक अंग मानिन्छ ।
क्वाँटीमा सामान्य गेडागुडी भन्दा छुट्टै भिटामिन पाइन्छ । यसमा प्रोटिन संगै आइरन, म्याग्निज, फोस्फोरस पोटेसियम, म्याग्नेसियम, लगायत खनिज पर्दार्थ समेत पाइन्छ ।
क्वाँटी गेडागुडी भएकाले जुन सुकै समयमा पनि आउने भएकाले जनैपूर्र्णमाको लागि यतिनै क्वाँटी नेपाल आयो भनेर भन्न नसक्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । क्ँवाटी विषेश गरी १०० देखि १२० रूपैया पर्ने उनले बताए । दिन प्रतिदिन काठमाडौंको बसोबास बढ्ने गरेकोले प्रत्येक वर्ष क्वाँटी बढि बिक्री हुदै गएको उनले बताए ।
श्रेष्ठले पोहेरको साल आफ्नो पसलमा ५ क्युटल क्वाँटी बेचेका थिए भने यो वर्ष ७ क्युटल बेच्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।